Hery - Tsiky dia ampy | Ankapobeny | 2
Raha hody Ravalo
2011-02-17 @ 06:14 in Ankapobeny
IZay izany no vaovao farany tamin'ity herinandro ity dia ny hoe hody amin'ny asabotsy i Ravalomanana rehefa nivahiny tany Afrika Atsimo nandritra ny roa taona. Zavatra vitsivitsy no mety hitranga fa amin'io kosa, raha tena tonga tokoa izy, no hahitana hoe iza no tena politisiana ary iza no jiolahim-boto. Fa inona tokoa no manentana an-dRavalo hody?
Voalohany indrindra aloha dia inoana marimarina tokoa fa efa misy tetika politika goavana nomanina hatry ny ela io daty hiverenany io. Tsy hoe vao nifoha dia hoe, izaho andeha hody.
Faharoa dia efa mitady hilamin-damina manana aretina ny Malagasy ka mila action kely... Ary fanararaotana azy izao Afrika mafampana izao (Tonizia, Ejipta, Libia)
Fahatelo dia efa manomboka arahin'ny Vondrona Iraisam-pirenena maso akaiky ny HAT taorian'ny fansalovan'ny (cyclone) Simao aniny SADC. Ka raha vao manao fihetsika hafahafa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy dia ho voa.
Fahaefatra dia tsy eken'ny sain-dRavalo raha ny mpanaradia azy (fetison) indray no lasa hEros satria nigadra sns, ka mety ho lasa vedety kokoa. Ka dia izy mihitsy no hitarika ny tolona.
Fahadimy dia efaniandry ela loatra ny Magro. Efa saika niova hoe "Andraso eo i dada" ilay hoe "Andraso eo i Paoly". Ka raha ela loatra ilay fihaonana dia lasa "lavitry ny maso, lavitry ny fo"... Tahaka ny mpifankatia virtoaly eto amin'ny internet ihany.
Farany dia hitan-dRavalo fa azo atao tsara, raha sendra tsy tafaverina eo amin'ny fitondrana, ny mialokaloka eto Madagasikara ihany fa tsy voatery ho any Afrika Atsimo. Nahita ny nataon'i Moubarak nandeha any Charm-El-Sheik mantsy izy.
Amin'izao ary aloha dia samy manao taim-bava na i Ravalo na i Christine Minisitry ny fitsarana. Fa ho hita izay tena hitranga amin'ny asabotsy.
Inviato con Windows Mobile�.
Nampidirin'i hery | 15 Hevitra | Trackback (0) | Permalink
Izany St Valentin
2011-02-15 @ 10:00 in Ankapobeny
<p>Omaly hono ny st Valentin... Dia feno hafatra etsy sy eroa. Tadidiko fony tany Nairobi dia manao akanjo mena daholo ny vehivavy na madio na maloto. Ny manamanana moa miaraka amin'ny fiara mena. Dia rehefa hariva dia mitondra raozy mena ny lehilahy. Ny teto Roma aloha tsy dia hitako nisy fiavahana be loatra raha tsy tao amin'ny tele no efa io foana ny resaka hatry ny tamin'ny asabotsy.
Fa ny an'ireo ray amandreny taloha toa andry papa sy mama ohatry ny tsy mba nila St Valentin e? Isanandro izao dia mifaneho fitiavana foana. Tamin'ny farany teo aza, izahay no natao Mariazy dia ry zareo no nanararaotra indray nanao volan-tantely :-) (eo amin'ny sary tany Toamasina)
Ah, tadidiko tampoka. Nandritra ny mariazy tokoa dia mompera hafa, fa tsy ilay nanome fiofanana sns, no nanao ny lamesa. Asa izay nanjo azy tao fa ny anaran'i papa sy i mama indray no naverimberiny isaky ny tokony hanonona ny anaranay. "Tonga eto isika hanatrika ny fanamasinana ny fanambadian'i Eugene sy Emma"... Dia gaga ny olona hoe hay manana anaram-bazaha hoe Emma koa ny vavy? Ry papa sy mama amin'izany nitsiky fotsiny fa angamba nahatsiaro ny tttamin'ny 34 taona lasa. Notenenina mihitsy ilay mompera hoe diso olona ange nareo izany e... Zay vao niova.
Inviato con Windows Mobile�.</p>
Nampidirin'i hery | 12 Hevitra | Trackback (0) | Permalink
Afaka i Ejipta, Gasikara sisa
2011-02-12 @ 07:54 in Ankapobeny
Anisan'ny nanamboarana an'ilay MailToBlog (jereo ny lahatsoratra afak'omaly) dia ny mba hahafahana indrindra manoratra ao amin'ny blaogy na dia aty anaty metro aza... Izay rehetra mahalasa ny saina sy eritreritra mandalo dia azo soratana avy hatrany fa tsy miandry any an-trano indray satria mety ho lany morsa.
Fa hiditra amin'ny tena resaka aho. Manoloana ny zava-mitranga ao Ejipta amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ny tokony ho nitranga tao Madagasikara tamin'ny fotoan'androny aho, na ny marina kokoa ny zavatra noeritreretin-dRavalo ho natao nefa tsy tanteraka tamin'izy nanolotra ny fahefana. Tahaka an'i Moubarak dia tratran'ny ankamehana izy, ary tahaka an'i Moubarak dia tsy nanome ny fahefana ho an'ny Filohan'ny Antenimiera izy, araka ny tokony ho izy ao amin'ny lalam-panorenana. Io mantsy no karazana vice-president. Fa ny miaramila, tahaka ny nataon'i Moubarak, no nomeny azy. Hatreo ihany no nitovy ny tantara, satria ny an'ny Gasy dia tsy nanam-potoana hisaorana sy hiderana ny fahendren'ilay filoha nametra-pialana akory izao tontolo izao, toa ny ataony amin'i Moubarak... dia efa nisy nandrombaka ilay fahefana. Dia nivadika ny tantara satria nanjary nitaky ny hamerenana an-dRavalo indray ny firenena hafa.
Inona ny zava-nitranga? Tsy niray ve ny miaramila ka tsy afaka hitantana fienena? Tsy mahay an'izany mitantana directoire militaire izany ve ny miaramila gasy, tsy toy ny tamin'ny andron'i Gal. Ramanantsoa intsony? Nahazo vola ve ny miaramila ka nanipy ny adidy "ho an'ny tanindrazana" nomena azy? Nandrahona sy natanjaka ve ny mpaka Fanjakana?
Inoako anefa fa raha nisy directoire militaire tao Madagasikara, na dia iray volana monja aza, dia avy eo nomeny ny teteza-mita, na dia tarihan'i Andry Rajoelina aza, ny fahefana dia tena ho hafa be ny fandehan'ny tantara ary tsy ho nisy izao krizy izao... Ary mety ho noderain'ny twitter sy facebook koa ny tgv hoe nanafaka an'i Madagasikara.
Fa tsy nitovy ilay tantara e... ny aza jiolahim-boto ihany...
Andrana mail to blaogy
2011-02-10 @ 15:40 in Ankapobeny
Somary nanahirana kely teo satria tsy nivoaka ny zavatra nosoratan'i kdaombaramita. Hay samihafa koa ny formats ampiasain'ny phones samihafa.
Tokony efa nmandeha amin'izao fotoana izao. Andramo ihany.
Fandefasana lahatsoratra amin'ny email
2011-02-10 @ 14:47 in Ankapobeny
Manomboka izao dia azo atao ny mandefa lahatsoratra amin'ny alalan'ny email hiseho eto amin'ny blaogy. Izany hoe alefanao mailaka amin'ny adiresy izay anao manokana, tsy asehosehonao olona, ny lahatsoratra sy ny sary dia mitranga avy hatrany ao amin'ny blaoginao.
Ahoana no fanao izany?
Rehefa tafiditra ao amin'ny toerana fandrindrana ny blaoginao ianao dia mandehana ao amin'ny "Momba ny blaogy" dia tsindrio ilay hoe Mailaka alefa blaogy. Ao amin'io no hahitanao ny adiresy manokana izay handefasanao ny lahatsoratra. Ny lahatsoratra alefanao dia miseho ao amin'ny blaogy afaka 5 minitra raha ela indrindra.
Raha toa ka tianao hovaina ny adiresy manokana dia misy fomba koa ao hanovana azy.
Ny lahatsoratra dia azonao asiana endrika (gras, italique, loko sns)
Inona ny fepetra?
Amin'izao aloha dia sary iray ihany isaky ny lahatsoratra no azonao alefa. Mbola hihatsara tsikelikely io arakaraka ny fotoana.
Ity hafatra ity izao dia nalefa avy tamin'ny email... miaraka amin'ny sary.